‘पहिले विद्यार्थीलाई फेल बनाइन्थ्यो, अहिले अलमल्याइयो’ : कोइराला | newdnn.com
४,आईतवार ०३:५१ Sangita Rai
अक्षराङकन पद्धतिबाट एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । नतिजाअनुसार डी र ई ग्रेड ल्याउने १ लाख बढी विद्यार्थीले ११ कक्षा पढ्न पाउने छैनन । उनीहरुले पुरक परीक्षा दिदा पनि आफुलाई सहजै अघिल्लो कक्षा प्रवेशमा धकेल्न सक्दैनन । विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्ने तर उनीहरुको क्षमता अनुसारका काम गर्न रोक्ने सरकारको पछिल्लो पद्धतिको अहिले आलोचना भइरहेको छ । यसका बारेमा हामीले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासंग कुराकानी गरेका छौँ ?
ग्रेडिङ सिस्टमले पनि विद्यार्थी फेल हुन छाडेनन् । किन होला ?
सरकारको निकम्माका कारण यस्तो भएको हो । हामीले विद्यार्थीको अघिल्लो चरण प्रवेश भन्दा पनि उनीहरुको भविष्यलाई भनेर यो विधिको वकालत गरेका थियौँ । तर सरकारले पुरा काम गर्न सकेन । अझ भनौँ सरकार आफै यो विधि ल्याएर थप असक्षम साबित भयो ।
राज्यका जनशक्ति र विकासका पूर्वाधार हुन विद्यार्थी । तर सरकारले त्यसलाई बुझेन । उसले विद्यार्थीलाई पास फेल गराउनु आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यो । यसरी नै उ असक्षम भएको हो । अब फेल भएका भनिएका एक लाख विद्यार्थीले के गर्ने ? सरकारले उनीहरुलाई के सोचेको छ ? अहिलेसम्म यसका बारेमा कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।
अब दुईओटा विकल्प छन । पहिलो उनीहरुलाई बढी भन्दा बढी सिप सिक्न लगाउनुपर्यो । जसरी हुन्छ । उनीहरुलाई प्राविधिक विषयमा निपूर्ण बनाएर रोजगारी सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा विद्यार्थीले म फेल भए भनेर हरेश नखाई आफ्नो भविष्यका लागि फरक र नयाँ काम गर्न स्वयंम विद्यार्थी अग्रसर हुनुपर्यो । अर्को भनेको सरोकारवालाहरु सबै एक ठाउँमा आएर यसबारेमा व्यापक छलफल गरी अन्यायमा परेका एक लाख विद्यार्थीको भविष्यका बारेमा न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ ।
अर्को बर्ष पनि यस्तै नतिजा आउने होला ? फेरि यस्तै व्यापक छलफल मात्रै गर्ने की दिगो समाधान खोज्ने ?
यसका लागि व्यापक छलफलको विकल्प छैन । अहिले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दलाली गर्न बाहेक अरु जानेका छैनन । यसका लागि पनि एक किसीमको खबरदारी आवश्यक छ । र शिक्षाको आमुल परिवर्तनका लागि साझा पहलको आवश्यक छ । जो भनाईमा होइन काम गराईमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।